မရှိမဖြစ် ဓါး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မရှိမဖြစ် ဓါး
Posted by alinsett on Feb 16, 2015 in Creative Writing, Critic, Drama, Essays.., History, My Dear Diary | 33 comments
အလင်းဆက် ပြောချင်တဲ့စကား အိုဘယ့် မြန်မာပြည်
ပတ်ဝန်းကျင်သည် အကျည်းတန်မှုများနှင့် ဝန်းရံပစ်လိုက်သောအခါ
ထိုပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းမှ လူသားသည် သိမ်မွေ့လှပနိုင်စွမ်းဖို့ရာ မလွယ်ကူတော့ချေ။
အဲသည် ဝါကျကလေးကို ချရေးဖြစ်ပြီးနောက် လက်ရှိ ကိုယ် ဖြစ်နေတာတွေကို ပြန် တွေးတောမိသည်။
ညနေက ကျွတော် ဆံပင်ညှပ်ပါသည်။
ဖြစ်ချင်တော့ မြေနီကုန်း ဘဏ်မှ ထုတ်ယူလာသော ငွေကျပ် သုံးသိန်းက လွယ်အိတ်ထဲ ရှိနေသည်။
ဆံပင်ညှပ်ဦးမှပဲ လို့ စိတ်ကူးရပြီး ဆံသဆိုင်ထဲ ဝင်လိုက်ချိန်မှာ အချိန်က ညနေမှောင်ရီပျိုးစဖြစ်နေပြီ။
ဆိုင်ထဲမှာ ကျွန်တော်နှင့် ဆံပင်ညှပ်သူပါဆိုမှ နှစ်ယောက်။ ထို့အပြင် ပို မရှိပါ။
ဆိုင်သည် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာဖြင့် အနည်းငယ် ဆိုင်မပီမသများ ဖြစ်နေသလားလို့။
သို့သော် ဒါက ကျွန်တော့် စိတ်အထင် ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
ဆိုင်ထဲမှ ဆံသပညာရှင်က အသက်ခပ်ငယ်ငယ် အမျိုးသားဖြစ်သည်။
ကျွန်တော် ဆိုင်ထဲ ဝင်လိုက်ပြီဆိုသည်နှင့် ”ထိုင်ခုံမှာ ထိုင်လေ” ဟု ပြောသည်။
ကျွန်တော်က ဝင်ထိုင်ဖို့အလုပ်မှာ ”လွယ်အိတ်ကြီး ချွတ်ပြီး ဟိုနားက ခုံမှာ ထားထားလိုက်ပါလား”တဲ့။
လွယ်အိတ်။ ဟုတ်သားပဲ ဆံပင် အညှပ်ခံဖို့ ထိုင်ခံမှာ ထိုင်တော့မယ့်သူတစ်ယောက်အနေနှင့် လွယ်အိတ်တော့ ချွတ်သင့်သည်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ဤလွယ်အိတ်ကို ကိုယ်နှင့်မကွာသာ ထားချင်သည်။
ကိုယ်အလွယ်တကူ လှမ်းမမြင်ရသော နေရာ / ထို့ထက်ပို၍ ကိုယ့်လွယ်အိတ်ကို တခြားသူတစ်ယောက်ယောက် ဆွဲယူပြေးသွားလျှင် ပြန် လှမ်းဆွဲယူရန် မလွယ်ကူသော နေရာမျိုးမှာ ထားလိုက်ဖို့ ကျွန်တော် စိတ်မချနိုင်ပါ။
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တွေရော မှတ်ပုံတင်တွေရော တခြား ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အရေးကြီးအရာတွေ ပါနေသည်မဟုတ်လား။
.ပျောက်သွားလျှင် အလွယ်တကူ ပြန်မရနိုင်သော အရာတွေ ပါနေသည့် လွယ်အိတ်တစ်လုံးကို ပြီးစလွယ်တော့ မထားရက်နိုင်ပါ။
ကျွန်တော်က စိုးရိမ်စိတ် လွန်ကဲတတ်သူလို့ပဲ ဆိုကြပါစို့။
အဲ့သည် စိုးရိမ်စိတ်ကြောင့်သာ ”ဟင့်အင်း ကျွန်တော့်အိတ်ထဲမှာ အရေးကြီးတာတွေပါနေလို့ ပေါင်ပေါ်ပဲ တင်ထားမယ်လေ” လို့ ဆံသသူကို ပြန်ပြောလိုက်မိသည်။
ပြောပြီး ပြီးချင်းမှာပင် စကားမှားသွားပြီဟု တွေးလိုက်မိသည်။
တကယ်ဆို အရေးကြီးတာတွေ ပါလို့ ဆိုသော အကြောင်းပြချက်အစား ”ရပါတယ် ပေါင်ပေါ်တင်ထားလည်း ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောလိုက်လည်း ရတာပဲ။
ဒါမှမဟုတ် သူပြောတဲ့စကားကို မသိချင်ယောင် ဇွတ်ဆောင်ပစ်လိုက်လည်း ဖြစ်တာပဲ မဟုတ်လား။
အခုတော့ ကိုယ့်အိတ်ထဲက အရာတွေရဲ့ အနေအထားကို သူစိမ်းတစ်ယောက်ရှေ့ ချပြလိုက်မိပြီ။
ညံ့လိုက်တဲ့ငါ . . .ပါလား။
အိတ်ထဲမှာ အရေးကြီးတာတွေ ပါလို့ ကိုယ်နဲ့မကွာ ထားမယ်ဆိုသော ကျွန်တော့်စကားအတွက် ပြန်ရလိုက်တာက ဆံသသူ၏ ”ဒီဆိုင်ထဲ အစ်ကိုနဲ့ ကျွန်တော် နှစ်ယောက်ပဲ ရှိတယ်” ဆိုသည့် စကားတစ်ခွန်း ဖြစ်သည်။
ဆံသသူက ပြုံးပြုံးလေး ပြောတာဆိုပေမယ့် ကျွန်တော့် စိတ်ထဲ စိုးရိမ်သည်ထက်ပို စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်သွားသည်။
ဟုတ်သားပဲ။ သည်ဆိုင်ထဲမှာ သူနဲ့ ကျွန်တော် နှစ်ယောက်ထဲပါပဲလား။
ထိုင်ခုံမှာ ဝင်ထိုင်ပြီးသည်နှင့် ဆိုင်အနောက်ဘက်ကို ကြည့်မိတော့ ဆိုင်သည် ခြံဝန်းတစ်ခုနှင့် တစ်ဆက်တည်းဖြစ်သောကြောင့် ဆိုင်၏ အနောက်ဘက်မှာ တံခါးပေါက်တစ်ခုရှိနေသည်။
ဆိုင်ရှေ့မှ ဝင်ပြီး ထိုတံခါးပေါက်မှ ထွက်လိုက်လျှင် ဆိုင်၏ အနောက်ဘက် ခြံဝန်းတစ်ခုထဲ ရောက်သွားလိမ့်မည်။
ခြံဝန်း အနောက်ဘက်ခပ်ဝေးဝေးမှာ သစ်သားအိမ်ကလေးတစ်လုံး ရှိပါသည်။
သေချာတွေးကြည့်တော့ ဒါကလည်း စိုးရိမ်စရာတစ်ခု ဖြစ်နေပြန်သည်။
ကျွန်တော့်ကို ဆံပင်ညှပ်နေတုန်း ဆံသသူဟာ နောက်ထပ် အပေါင်းအပါတွေကို အချက်ပြပြီး ဆိုင်ထဲ ဝင်လာဖို့ခေါ်/ ပြီးလျှင် သူ့လက်ထဲက ချွန်မြနေသည့် ကတ်ကြေးဖြင့် ကျွန်တော့်အနောက်ကနေ ခါးကို ထောက်ပြီး ပါလာတာ အကုန်ပေးစမ်း မပေးရင် ကတ်ကြေးနဲ့ထိုးလိုက်မယ်ဆိုပြီး အကြမ်းဖက်လျှင်ကော. . .
ဟင့်အင်း ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာ အကြမ်းဖက်လိုစိတ်ရှိသူတွေအနေနဲ့ အရှင် လုခြင်းအစား အသေလုပြီး အစဖျောက်တဲ့နည်းကို အသာလေး လုပ်လို့ရနေတာပဲ။
တွေးလေလေ စိုးရိမ်စိတ်က ဖိစီးလာလေလေ ဖြစ်နေသည်။
ဆံသသူ၏ လက်ထဲမှ ကတ်ကြေးက ကျွန်တော့် ခေါင်းပေါ်မှာ တရွှမ်းရွှမ်းပြေးလွှားနေသည်။
ဘယ်တော့များ အဲသည်ကတ်ကြေးအချွန်က ကျွန်တော့် နားထင်ကို လာထောက်မလဲ. . .
ဒါမှမဟုတ် အဲသည်ကတ်ကြေးက ကျွန်တော့်ခါးကို လာထောက်လေမလား ဆိုသော စိတ်သောကဖြင့် မှန်ထဲမှာ ကတ်ကြေးကို မျက်ချေမပြတ် ကြည့်နေမိသည်။
ဆံပင်ညှပ်သူသည် ပရိုဖက်ရှင်နယ် မပီသပါ။
ဆံသခြင်းအလုပ်ကို လုပ်နေသော်လည်း ကျွမ်းကျင်သပ်ရပ်စွာ စိတ်ကျေနပ်လောက်အောင် သူ့ပညာကို မပြနိုင်ပါ။
သို့သော် ကျွန်တော်က ဤဆိုင်ထဲမှ မြန်မြန်ထွက်သွားချင်ပြီ။
တစ်ဝက်တပျက် ညှပ်လက်စတန်းလန်းကြီးဖြင့် တော်ပြီ ဟု ပြောချလိုက်ပြီး ဆိုင်ထဲက ပြေးထွက်မိမတတ်ဖြစ်နေပြီ။
ဆယ့်ငါးမိနစ်မျှသော ဆံသချိန်သည် ကမ္ဘာချီအောင် ကြာနေပြီလား ထင်ရသည်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ ဆံသဆိုင်ကနေ ဆံပင်ညှပ်ပြီးလျှင်ပြီးချင်း
(ဘလိတ်ဓါးဖြင့် ဆံပင်တွေ တိခြင်းပင် မလုပ်ခိုင်းတော့ပဲ)
ကျွန်တော့် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုက ကြောက်စရာကောင်းနေတာ။
ကျွန်တော်တို့ ရပ်ကွက်ထဲက ကျိုက္ကလော့ စေတီတော်ဘုရားပွဲတော် ကျင်းပစဉ် ရက်တွေအတွင်းက တစ်ညမှာတော့ လူတစ်ယောက် ဓါးဖြင့်အထိုးခံရပြီး ပါသမျှကို လုယူမှု ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဓါးဖြင့်အထိုးခံရပြီး လုယက်ခံရကတော့ ကံကောင်း ထောက်မစွာ အသက်မသေခဲ့။
ဒါပေမယ့် နောက်တစ်ညမှာတော့ လူကိုအသေသတ်ပြီး ပါသမျှ လုယက်သွားမှုတစ်ခု ထပ်ဖြစ်သည်။
အလုခံရသူသည် မိန်းမလျာတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဟု ကြားသိရပါသည်။
မကြာသေးခင်က ကချင်ပြည်နယ်မှာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဆရာမလေးနှစ်ယောက် ရက်ရက်စက်စက် မုဒိမ်းအကျင့်ခံရ သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည်။
ကျွန်တော့် အသိမိတ်ဆွေတချို့၏ ဖုန်းတွေထဲမှာ ဘာသာခြားသူတို့က ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီး လူ အရှင်လတ်လတ်ကို ခေါင်းဖြတ် သတ်ပြသော ဗီဒီယိုဖိုင်များ ရှိနေသည်။ အဲ့ဒါတွေ ကျွန်တော် ကြည့်ဖူးသည်။
ပြီးခဲ့သည့်လက မြေနီကုန်းလမ်းဆုံနားမှာ လမ်းသွားရင်း ဖုန်းကို ကိုင်လာသူ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဆီမှ လူတစ်ယောက်က ဖုန်းကို ဆက်ခနဲ လုပြေးသွားသည့်လုယက်မှု ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် မြင်လိုက်ရသည်။ လူသူ ရှုပ်ထွေးရာ လမ်းဆုံမှာပင် လုယက်သူတွေက လှုပ်ရှားနေကြပြီ။
လူကို ရိုက်ပြီး ပစ္စည်းလုယူမှုများ. . .
အပျောက် ဖျောက်မှုများကို မကြာခဏ ကြားနေရသောအခါ ကျွန်တော် လက်ချည်းဗလာသက်သက်ဖြင့် လမ်းမထွက်ချင်တော့ပါ။
မိုးချုပ်အိမ်အပြန် လူပြတ်ရာလမ်းကို ဖြတ်လျှောက်နေရသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်ဆီမှာ ပြန်လည် ခုခံကာကွယ်ဖို့ လက်နက်တစ်ခုခုတော့ ပါသင့်ပြီ။
စိုးရိမ်စိတ်ချည်းသက်သက်နှင့် လမ်းထွက်မည့်အစား. . . ကိုယ့်အနားကပ်လာပြီး ဓါးထောက် လုမည့်သူကို ဖျတ်ခနဲ ဓါးနဲ့ ပြန်ထောက်ပြီး ခုခံနိုင်သင့်ပြီ။
ကျွန်တော် ဖတ်ဖူးတာတော့ ကိုယ့်ကို အသက်အန္တရာယ်ကျရောက်အောင် ပြုလုပ်ဖို့လာသူကို ပြန်လည်ခုခံ ကာကွယ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။
ကိုယ်ကမှ ပြန်လှန် မခုခံလျှင် ကိုယ့်ကို ရန်ပြုလာသူ၏လက်ထဲ လည်စင်းပေးရတော့မည် မဟုတ်လား။
ခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်တော့ ရှိကို ရှိရမည်။
တစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အကြောင်း တွင်းဆုံး မမှတ်မိပါ။
ကိုယ့်ကို အသက်အန္တရာယ်ကျရောက်တဲ့အထိ ရန်ရှာသူကို ဘယ်လောက်ထိ ပြန် လုပ်ခွင့်ရှိသလဲ။
သူ့အသက် သေသည်အထိတော့ လုပ်ခွင့်မရှိဘူးထင်သည်။
ဒါပေမယ့် ပြန်လည် ခုခံရင်း လက်လွန်သွားပြီး ရန်ရှာသူ သေသွားလျှင်ကော. . .
အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ့်အသက်ကို ရန်ပြုလာသူအနေနဲ့ ကိုယ့်ကို ဆက်လက် ရန်မရှာနိုင်လောက်သည်အထိတော့ ပြန်လည်ခုခံခွင့် ရှိမည်ထင်သည်။
လွန်ခဲ့သော ခြောက်နှစ်လောက်က ထိုဥပဒေကို ဖတ်ရှုလေ့လာဖူးခဲ့သမျှ အခုအချိန်မှာ မမှတ်မိတော့တာ ကျွန်တော့် မှတ်ဥာဏ်အားနည်းချက်ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်မိသလောက်တော့ အရိုးအသွား ၆ လက်မကျော်သော ဓါး သို့မဟုတ် ချွန်ထက်သော လက်နက်တစ်ခုခု ကိုင်ဆောင်ထားသည်ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိလျှင် ဥပဒေအရ အပြစ်ပေးခံရမည်ဆိုတာပဲ။
ဒါဖြင့် အရိုး အသွား ၆ လက်မ မပြည့်သော (ဥပမာ ၅ လက်မအရွယ် ခေါက်ဓါးတစ်ချောင်း) လက်နက်တစ်ခုလောက်တော့ ဆောင်ထားလို့ ရတန်ကောင်းပါရဲ့။
တကယ်တော့ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်အတွင်းမှ လူမှုဝန်းကျင်တစ်ခုအတွင်းမှာ
ဘာစိုးရိမ်ကြောင့်ကျမှုမှ မရှိဘဲ ဘာလက်နက်မှ ဆောင်ထားစရာ မလိုဘဲ
လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းစွာ သွားလာလှုပ်ရှားခွင့် ရနေလျှင် ဘယ်လောက် ကောင်းလိုက်လေမလဲ။
ကိုယ့်နံဘေး ကပ်လာသူတိုင်းဟာ ကိုယ့်က်ု အန္တရာယ် မပြုရဲ မပြုနိုင်လောင်အောင် ဥပဒေအရထိန်းချုပ်မှုရော အသိတရားအရ ထိန်းချုပ်မှုပါ ရှိနေသင့်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ မလုံခြုံမှုနှင့် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ အခြေအနေများကို ချင်ခင်နှစ်သက်နိုင်သူများမှ မဟုတ်တာ။
ဒါပေမယ့် အခုအချိန်ထိတော့ ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေရသည့် ပတ်ဝန်းကျင်သည် စိတ်ချလက်ချသွားလာ လှုပ်ရှားနိုင်ခွင့်ကို မလုံခြုံမှုက ကြီးစိုးထားဆဲဖြစ်သည်။
ကျွန်တော် ဓါးတစ်ချောင်း ဆောင်ထားချင်နေပါတော့သည်။
စာပေ အနုပညာများ /ကဗျာဆောင်းပါများ ရေးသားနေသည့် ကျွန်တော့်လက်များဖြင့်
ထိခိုက်နာကျင်စရာ ကိစ္စများ ဖြစ်ပေါ်စေတတ်သည့် ဓါး လက်နက်တစ်ခုကို ကိုင်ဆောင်ထားရမည့်အတွက်တော့
10 / 02 / 2015 / 13 : 27 PM
ကောင်းကင်ပြာ အကြိုက်ဆုံးပစ္စည်းတွေထဲမယ် ဓားလဲပါတယ်…။ (၁၀)တန်းနှစ်ကတည်းက စ စုမိတာပါပဲ…။ ခေါက်ဓား၊ Butterfly လို့ခေါ်တဲ့ ဓားရော..(အဲ့ဒါက တွံတေးအသွား..သင်္ဘောပေါ်က ၀ယ်တာ..)၊ ပြီးတော့ ခလုတ်ဓား၊ မီးခြစ်လိုလိုပုံစံ ဓားတွေရော (အဲ့ဒါက ဆူးလေတစ်ဝိုက် လမ်းဘေးဆိုင်က ၀ယ်တာ..)…။ ဓားတစ်ချောင်းများ ၀ယ်ပြီးရင် အဲ့ဒါလေး တသသနဲ့…အမေမမြင်အောင်လဲ ဖွက်ရသေးတာ…..။ အိပ်ခါနီးတောင် ဓားကို သ မပြီးလို့ ခေါင်းအုံးအောက်ထားမိတာ…မနက်ရောက်တော့ မားသား မိပါရောလား…။
ဓားကို ခေါင်းအုံးအောက်ထားအိပ်ရလောက်အောင် နင့်မှာ ဘယ်လိုအန္တရာယ်ဆိုးတွေများ ကျရောက်နေသလဲလို့တောင် အငေါ့ခံရသေး…..
ရုံးအဆင်း သင်တန်းပြီးမှ အိမ်ပြန်တဲ့လမ်းမှာ….အိမ်က ဘယ်သူမှလာမကြိုတိုင်း…၁၅မိနစ်စာ လျှောက်ရတဲ့….ဒီမှောင်မဲမဲ လူပြတ်တဲ့ အင်းစိန်လမ်းကို ဖြတ်ဖို့…ဓားတစ်ချောင်းကတော့….ကောင်းကင်ပြာအတွက် လိုတယ်….။
အသိ ရဲတစ်ယောက်ကတော့…တစ်ခုခုဖြစ်ရင် ပေါင်ကိုထိုးလို့ သင်သွားဖူးသေးတယ်…။
တကယ့်တကယ် ကြုံလာရင်တော့ ထိုးရဲမလား မထိုးရဲလားတော့ မသိဘူး…။
ခုတော့ D Mate က၀ယ်ထားတဲ့ Army ပုံ ခေါက်ထားလေးကို အိတ်ထဲဆောင်ထားမှပဲ…ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိသလို ခံစားရနေရတယ်….။
တစ်ခုပဲ လက်လက်ဆင်ရေ…။ ကိုယ့်လက်နက်က သူ့လက်နက်ဖြစ်မသွားစေနဲ့……။
ငါ့နှယ်….Army ပုံ ခေါက်ဓားကို ခေါက်ထားနဲ့ မွှားဖြစ်အောင် မွှားသေးတယ်….
အရင်တုန်းကတော့ အိတ်ထဲမှာ လက်နက် တခုခုဆောင်ထားလေ့ရှိတယ်။
ဒါမှ မဟုတ်လဲ ဘယ် အရာက ကိုယ့်အတွက် လက်နက်ဖြစ်စေမလဲ အမြဲ ကြည့်ထားတတ်တဲ့ အကျင့်ရှိတယ်။
လက်နက်ကိုင်တွေ အုပ်ချုပ်တဲ့ တိုင်းပြည်က အရမ်းလုံခြုံတယ်မလားကွယ်တို့။
နောက်ပိုင်း ဒီ ရောက်တော့ အဲဒီ အကျင့်က ပျောက်သွားပြန်ရော။
ဒီမှာတော့ အမျိုးသမီးလေးတွေ ဆောင်ဖို့ စပရေးဘူးလေးတွေရှိတယ်။
ဒါ အပြင် လူတစ်ယောက်ရဲ့ သေကွင်းသေကွက် ဘယ်မှာ ရှိတယ်လောက်တော့ သိထားသင့်တယ်။
အနုပညာ စိတ်နဲ့နေတဲ့ သိမ်မွေ့တဲ့စိတ်ရှိသူတွေကို တော့ မသင်ပေးချင်ပါဘူးးး
ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်လုံခြုံရေး ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူမှ ဖြစ်မဲ့ နိုင်ငံမှာနေတော့လည်း ပြင်ဆင်ထားပေါ့ ဆက်ဆက်ရယ်။
မင့် comment ထဲက ကိုယ့်လက်နက်က သှူ့လက်နက် ဖြစ်မသွားစေနဲ့ ဆိုတာလေးက တကယ် အသုံးဝင်တဲ့စကားလေး။
လာရောက် ဖတ်ရှုသွားတဲ့အတွက်လည်း ဇူးဇူးပါ။
ဓါးတစ်ချောင်း ဝယ်မိရာကနေ ဖြန့်တွေးမိ ချရေးမိတဲ့ အက်ဆေးတစ်ပုဒ်ပါ။
ဒီတိုင်းပြည်က ကိုယ့်ကို လုံခြုံစေရေး အပြည့်အဝ ပေးမထားဘူး။
ပြည်သူ့ရဲတို့ဆိုတာတွေက အားကိုးစိတ်ချလို့ရ မရတော့ သေချာမသိ
တခါတခါ သူတို့ကတောင် ကိုယ့် လုံခြုံရေးကို ခြိမ်းခြောက်လာတာတွေ ရှိသေးးးး
ဆိုတော့ ငါးလက်မလောက် ဓါးတစ်ချေါင်းက်ု ကဗျာရေးတဲ့ လက်ကလည်း ကိုင်ရတာပဲ
တိုင်းရင်းသား ၁၃၅မျိုးနဲ့.. မျိုးကြီးဗမာက…အမျိုး၊ဘာသာ၊သာသနာအော်နေတဲ့… ဥပဒေအထက်မှာလူတွေ.. များနေတဲ့တိုင်းပြည်…။
ဓားပြ၊ သူပုန်၊ တောကြောင်၊ မုဒိန်းမှု၊ လူသတ်မှု၊ ကလေးပြန်ပေးဆွဲမှုတွေကမ္ဘာတန်းအများဆုံးပြည်တခု….။
လောလောဆယ်လက်ပူတိုက်နည်းကတော့… ဓားအစား.. ပက်ပါစပရေးသုံးဖို့ပါ…။
ဈေးလည်းသိပ်မကြီး../သော့ချိတ်မှာတပ်ထားလို့လည်းရ…။ ရွာထဲကအရီးတော်တွေအတွက်ပါ.. နောင်ကြုံရင်…လက်ဆောင်အနေနဲ့ပို့ပေးထားမယ်..။
SABRE Pepper Spray – Advanced 3-In-1 Police Strength – Compact Size with Clip (Max Protection – 25 shots, up to 5x’s more)
Price: $6.51 & FREE Shipping on orders over $35. Details
Want it Tuesday, Feb. 17? Order within 12 hrs 39 mins and choose One-Day Shipping at checkout. Details
သများတို့လို ပိန်ပိန်ပါးပါး (အဟွတ်)
ခိုကိုးရာ မဲ့ (အဟွတ်)
ညည်းတို့တိုင်းပြည်က… ခွေးတောင်…တခြားခွေးကို.. မတရားတာလုပ်ရင်.. ဖမ်းထောင်ချမယ့်တိုင်းပြည်..။
သူကြီး..ကျနော့်အတွက်တော့ ပစ်စတိုတစ်လက်လောက်..လက်ဆောင် ပို့ပေးပါလား..
ဘယ်သူမှ မမြင်အောင် ဖွက်ထားမယ်လေ.. ။
လေလောဆယ်တော့..အိမ်မှာ…ခလုတ်ဓါးလေး တဖျောက်ဖျောက် လုပ်ကြည့်နေလို့..
3D ပရင့်တာတလုံးပို့ပေးလိုက်ပြီး.. သေနတ်လုပ်တဲ့ပရိုဂရမ်ပါပေးလိုက်ရင်.. သေနတ်ဖြစ်သဗျ..။
အဲဒီ 3D ပရင့်တာ တွေ ဒီမှာ ခေတ်စားနေသဗျ။
အန်တီယူ ရီဆာ့(ချ) ဌာန မှာရှိတယ်။
အဲဒါသာတွင်ကျယ်ရင် လက်မှု ပညာ တိမ်ကောတော့မလားမသိ
အမှန်ဆိုရင် ကျော်တို့ တွေ ဆောင်းထားသင့် တဲ့ အရာမဟုတ်ဘူး
ကိုယ့် ကိုကိုယ် ဂရုစိုက်တာတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ
ဓါးနဲ့တောင် မလုံခြုံသေးဘူး မိုးမင်းသားရေ
.ဓား ဆိုတာ မရှိမဖြစ်လို့ မယူဆစေချင်ပါ…
.အသင့်ရှိနေရပေမယ့် ရန်လိုနေဘို့ မဟုတ်ဘူး…
.အဓိက က အကြောက်တရားကို ဖယ်ထားပြီး…
ဒါမယ့် လုံခြုံမှု မဲ့တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမှာာာာာ
ဘတ်စ်ကားစီးတာကအစ ဘယ်အချိန် ဂျိန်းခနဲတိုက်မလဲ မှောက်သွားမလား
တံတားလက်ရမ်း ခနော်ခနဲ့အောက် ဝန်းခနဲ ကျသွားမလားလို့ ကြောက်ပြီး စီးရ သွားလာနေရတော့လည်းးးး
အကြောက်တရားဟာ တစိမ့်စ်မ့် ဝင်ရောက်နေခဲ့ပြီပေါ့။
ဗမာပြည်သူတွေတော်တော်များများဟာ ကောက်ရိုးတပင်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် အားကိုး အားထားရှာပြီး ကူညီရာလိုနေခဲ့ပြီမဟုတ်လားးး
.ခုတော့ ရပ်ကွက်တွေချဲ့..နယ်တကာကလူပေါင်းစုံ စုဝေးလာကြတော့..အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူး
.တစ်လောကလည်း သားအမိနှစ်ယောက်ကို အိမ်ပေါ်တက်သတ်သွား ဆိုလားကြားလိုက်မိတယ်
အိမ်ပေါ်တက် သတ်သွားတာ အဟုတ်
ကျနော်နေတဲ့ ရပ်ကွက်ရဲ့ ဘေးတင်
စကားမစပ် သူဂျီး ပို့လိုက်တဲ့ ၅.၁၁ တက်တစ်ကယ် ဓါးကလေးတွေ ဘယ်သူမဲပေါက်သွားသလဲ
မသိ။ လမ်းပေါ်ရန်ဖြစ်တဲ့ အတတ်ပညာကတော့ ငယ်ငယ်က အဓိပတိ လူမိုက်တွေ အမြင်အမျိူးမျိုးနဲ့ သင်ပေးသွားဖူးတယ်။ သူတို့ထဲမှာ အရေးကြီးဆုံး တူညီတဲ့ အချက်ကတော့ ရန်မဖြစ်နဲ့ တဲ့။ ရန်ဖြစ်နေတဲ့နား မသွားနဲ့တဲ့။ ဆိုတော့ ပထမအချက်ကို ကောင်းကောင်းလိုက်နာလိုက်တာ ကလေးဘဝရန်ဖြစ်ဖူးတာလွဲလို့ လုံးဝ ရန်မဖြစ်ခဲ့ပါ။ သို့သော်..ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုဖို့ ယက်ဖို့ လာတဲ့သူကို ခုခံဖို့ကတော့ ဗဟုသုတ ကောင်းစွာ ရှိထားသင့်ကြောင်း ယူဆမိသည်။ တစ်ခါတုန်းက ဆန်အိတ်လို အိတ်မျိုး ဆွဲတဲ့ သံချိတ်ကြီး ကိုင်ထားတဲ့ လူတစ်ယောက်က လူပြတ်တဲ့လမ်းကြားမှာ ညီလေး ပိုက်ဆံတစ်ထောင်လောက်ကွာတဲ့။ကိုယ့်မှာလည်း များများစားစား ပိုက်ဆံအိတ်ထဲ မရှိတာကြောင့်မို့လို့ သူနဲ့ ခံမသတ်တော့ဘူး။ ရော့ဗျာ ဆိုတော့ ကျေးဇူးပဲတဲ့။
တစ်ထောင်လောက် သို့မဟုတ် အဲ့လို တောင်းတာဆိုရင်တော့ ကိစ္စ မရှိ
လူကိုသတ်ပြီး နာရီကအစ ဖုန်းကအစ ပါသမျှ ယူချင်
အစဖျောက်ချင်တာတွေကိုတော့ အသာတကြည် ယူခွင့် သတ်ခွင့် ပေးလို့မရဘူးကိုးဗျ
လက်နက်ကိုင်လုယက်သူက…” ပေးပိုက်ဆံအိပ်”ဆို.. ဘာလုပ်မလည်းဆိုတဲ့အမေးကိုပါ…။
ပုံထဲ ပါတဲ့ဓားမယ်…ခွေးသွားစိတ်တွေများ မြိနေတာပဲဟယ်….
ဒီထက် ဓားသွားရှည်ပြီး…ခွေးသွားစိတ်တွေပါ ၃ပုံ ၂ပုံလောက်ပါရင် လည်ချည်း ထိုင်လှီးတဲ့အခါ… အတော်အရသာရှိမှာပဲနော်….
ကင်းကောင်ပြာလေး ထိုးဓါ ခံချဉ်လိုက်ထှာ….။
ဟေ့ သူထိုးကိုယ်ထိုးဗဲကွ… ကင်းကောင်သော ဗာသော နားမီလည်ဗူးစ်…
မင်းရဲ့ မရှိမဖြစ်ဓား နဲ့ အပေါ်က မင်္ဂလာဂီ မှာ ရှ သွားပြီ။
ကိုယ်ခံပညာ တတ်ထားတော့ ကောင်းတယ်ထင်ပေမယ့်
သိုင်းကို ခါးပတ်နက်ထိတတ်ထားတဲ့ နယ်က မ်ိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကတော့ သူ့ရွာကလူတွေစုပြီး ၀ိုင်းရိုက်တာ ခံလိုက်ရတာ မသေမရှင်နဲ့ နှစ်အတော်ကြာအောင် နေသွားရတာကြည့်ပြီး ဘယ်လိုပြောရမယ်မှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။
လူကြီးအတွေးနဲ့ ပြောရရင်တော့ လက်နက်ဆိုတာ မဆောင်ထားသင့်ဘူးထင်ပါတယ်။
၁။ အချိန်နဲ့အခါနဲ့ ခရီးသွားပါ။
၂။ တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်း ရွှေ ငွေ သယ်ယူတဲ့အခါ တတ်နိုင်သမျှ ကိုယ်နဲ့မကွာ ထားပါ။
၄။ အဖိုးတန်ပစ္စည်းကို နေရာခွဲထားပါ။
၅။ အဖိုးတန်ပစ္စည်းမပါသလို ဟန်ဆောင်နေပါ။
၆။ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေကိုကြိုတင် စူးစမ်းပါ။
အခုလို ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်မျိုးဆိုရင် မညှပ်ခင်ကတည်းက ကြိုတင်စူးစမ်းပြီး သင်္ကာမကင်းဖြစ်ရင် မညှပ်သင့်ဘူး။
အကြံပေးချက်လေးတွေအတွက် ဇူးဇူးပါ တီမမ …
ကျုပ်က လှည်းတန်း သံလမ်း ပြည်ရိပ်မွန် ဒီနေရာတွေကလွဲရင်
ညဘက် ဘယ်မှ မသွားသလောက်ဆိုတော့ ကြောက်စရာမရှိ ၊
သံလမ်း နဲ့ လှည်းတန်းက ကျုပ်နယ်မြေ ၊
အဲ အဲ ပြီးတော့ ကျုပ်ပုံက ( လုချင်စရာ တစ်စက်မှ မရှိ )
ဦးမျိုးကသာ လု ချဉ်စရာ မရှိတာ..
ဦးကြောင်ဆိုတဲ့ ပုပ်ဂိုကြီးကတော့ လု ချဉ် စရာတွေ ရှိတယ်…။
လုလု ကို ဆားမဲချည်း ပြောပြောနေလို့…
Fully Hand Forged Dragon Japanese Samurai Katanas Swords #355
$154.99 from http://www.HandMadeSword.com
Steel: 1045 steel Blade: heat tempered; can be bent but go to straight as original shape; Edge: Sharp; Hamon(Tempered line): Distinct real Hamon …
ဓားဆိုလို့.. ဂငယ်ဂျပန်တွေမားကက်တင်းးတော်တော့.. သူတို့ရဲ့..ဆာမူရိုင်းဓားတွေများ.. အိမ်အလှထားအဖြစ်ရောင်းလိုက်ရတာ.. တနှစ်တနှစ်.. မြန်မာမတွေ.. ( ၀ီဝီလို.. ရိုင်းရိုင်းပြောရရင်) ယိုးဒယားသွားဖာခံရတဲ့ပိုက်ပိုက်ဝင်ငွေထက်.. ၁၀ဆမကများမယ်ထင်….။
မြန်မာတွေငှက်ကြီးတောင်ဓား.. ဘယ်သူမှ.. အလှဓားအဖြစ်လုပ်မရောင်း…။
လူမစွမ်း​တော့လည်း နတ်​က ဖာသိဖာသာ ဆိုတဲ့ဇဂါးပုံလို
ဘိရုမာ အင်​ယာ​တေကလည်း ဒါးလှလှ မလုပ်​တတ်​ပြန်​​လေ​တော့ ဘိရုမာ မာကတ္တာ​တေက ဘာများတတ်​နိုင်​အုံးပါအံ့နည်း
ငှက်ကြီးတောင် တောင်တဲ့ဓါး အဲလေ
ငှက်ကြီး တောင်လောက် ရှိတဲ့ဓါးဒါလည်း ဟုတ်သေးပါဘူး
ထားပါတော့ အဲ့ငှက်ကြီးတောင်ဓါးကို သိပ်ကြိုက်တာ သူကြီးရ
ကျနော်က ငှက်ကြီးတောင်ဓါးဆိုရင် အိမ်နံရံမှာ အလှချိတ်ထားရတာထက်
ကျောမှာ လွယ်ပြီး လမ်းသလားချင်တာ
မြင်းကြီးပေါ်ထိုင် ဓါးကြီးကို လွယ်